ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၏ ဌာနပျက်စီးစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၏ ဌာနပျက်စီးစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး၏ ဌာနပျက်စီးစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ
Posted by Phaung Phaung on Aug 3, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ဂေဇက်မန်ဘာများ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကနေစပြီး ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
အခုပို့စ်ကတော့ ဝန်ကြီးတွေရဲ့အတ္တသဘောနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှေ့ထားပြီး ပြုမူဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ဌာနတွင်းအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကနေ အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်အတိုင်းပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ ့ဖြိ ုးရေးဦးစီးဌာနက အရာရှိတစ်ဦးပါ ၊
ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်မြင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်က စပြီးကျွန်တော်တို ့ဌာနဟာ နာမယ်ပြောင်းသွားပါတယ် ၊
မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ် စစ်သားစုဆောင်းရေး ဦးစီးဌာန ဖြစ်သွားပါတယ် ၊
တပ်က ဗိုလ်ပြုတ် ၊ ဗိုလ် ငြိမ်း တွေထည့်လိုက်တာ အငယ်ဆုံး အရာရှိအဆင့်မှာ ထက်ဝက်လောက် ၊ အလယ် အလတ်အဆင့်မှာ ၆၀% လောက် ၊ အထက်အဆင့်မှာ ၉ဝ % လောက် ဖြစ်သွားပါတယ် ၊
ပညာရှင် ၊ကျွမ်းကျင် ၊အတွေ့အကြံ ုရှိတဲ့သူတွေကုန်သွားရင် အလုပ်လုပ်လို ့မရတော့မှာမို ့လို ့သာ အကုန်မထည့်တာ ထင်ပါတယ် ၊
သူ ့ကိုုချီးကျူးဘို ့ကောင်း တဲ့ အချက်တစ်ချက်တော့ရှိပါတယ် ၊၁ဝတန်းမအောင်၊ဘွဲ ့မရတဲ့ အရည်အချင်းမရှိ အဖါးတော်(ဘောမတော်) အိမ်စောင့်တော်၊ ဈေးဝယ်တော် ၊ မာလီလုပ်တာတော် ၊ ဒရိုင်ဘာလုပ်တာတော် ၊ ထမင်းချက် တာတော်တဲ့ ဗိုလ်ပြ ုတ်၊ ဗိုလ်ငြိမ်းတွေကို ရအောင်ရှာနိုင်တာပါပဲ ။
အခုဆိုရင် ရုံးမှာ ဘွဲ ့မရတဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊၁ဝတန်းမအောင်တဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ဦးစီးအရာရှိတွေနဲ ့အတော့်ကိုဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်နေပါပြီ။
ပညာရှင်၊ကျွမ်းကျင် နေရာတွေကို ဗိုလ်ပြုတ် ၊ ဗိုလ် ငြိမ်း တွေထည့် ၊ရုံးတစ်ရက်မှမလာ ၊သူ ့အိမ်မှာ အိမ်စောင့် မာလီလုပ် နဲ ့ဟန်ကျနေပါတယ် –
နာမယ်တွေတော့တပ်မပြောတော့ပါဘူး ၊ဒုညွှန်ချုပ် ၊ညွှန်မှူးတွေကလည်း အရည်ချင်း မရှိဆိုတော့ရှိသမျှ ဝန်ထမ်း တွေခေါ်ပြီး ဝန်ကြီးရဲ့ ညကျောင်း မှာနေ ့စဉ် အဆဲသွားခံ ၊မနက်ကျရင် ဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်ဖိနှိပ် ပြသနာရှာနဲ့ နိုင်ငံ အကျိုးတွေကိုသယ်ပိုး နေကြပါတယ် ၊(အိမ်ကို သယ်သွားတာကိုပြောတာပါ )။
သူ ့တပည့်တွေ ဟာအရည်ချင်းမရှိ တော့ နေရာတည်မြဲရေးအတွက် ဘောမ တဲ့ အလုပ်ကို အဓိက ထားပြီးလုပ်ဆောင်ရပါတယ် ၊
ခင်မောင်မြင့်အတွက် လည်း အရည်ချင်းရှိတဲ့သူဆိုရင် သူ ့ကိုဖါးမှာ အရေးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတော့ တိုင်းပြည်အကျိုးမရှိရင်နေ ဌာနပျက်ချင်ပျက်ဆိုပြီး ငတုံး တွေကို မရ အရ ရှာဖွေထားပုံရပါတယ် ။
ခင်မောင်မြင့်ရဲ့ အယုတ်မာဆုံး လုပ်ရပ်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ် အိုးအိမ်ရုံး အလုပ်တွေရဲ့ ၈၀%ဟာ ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိပါ တယ် ၊
အဲဒီအလုပ်တွေရဲ့ ထက်ဝက်က ပြည်သူတွေနဲ ့ထိတွေ ့ဆက်ဆံရတာပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးရတာပါ ၊
ရန်ကုန်မှာ လုပ်ပေးရမယ့် အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် ၊
သူ ု့ရဲ့အာဏာနဲ ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်ရန်ကုန်ကအလုပ်တွေ ကို နေပြည်တော်မှာ ယူ(ပြောင်း)လုပ်တာကြောင့် ရန်ကုန်ကလူတွေ နေပြည်တော်ကို လိုက်လာရပါတယ် ၊
နေစရာ ၊သွားစရာ ၊စားစရာ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရပါတယ် ၊
ဒီကြားထဲမှာ ဗိုလ်ပြုတ်တွေက မခက် ခက်အောင် အဆင့်တွေ ရစ်ချက် တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးလိုက် သေးတယ်၊
ဝန်ထမ်းတွေကထပ်ညစ်လိုက်တဲ့အခါထိတွေ ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေဘယ်လောက် စိတ်ဆင်းရဲ ရမယ် ဆိုတာမှန်းဆနိုင်ပါတယ် ၊အဲဒီစံနစ် ဟာ ဗိုလ်ပြုတ် တွေစားပေါက် ထွင်နိုင်ဘို့ အခွင့်ရေး ရသွားပါ တယ် ပွဲစားတွေပေါ်လာတယ် ၊
ပွဲစားတွေနဲ့ပေါင်း ရိုက်တယ် ပြည်သူတွေကတော့ ဟက်တက် ပဲ၊ ဝန်ထမ်းတွေအနေ နဲ့လည်း ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော် တစ်လ ကို ၄-၅-၆ ကြိမ် ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်ရပါတယ် ၊
ဒါပေမဲ့ ခရီးစရိတ် TA,DA,မပေးပါဘူး ကိုယ့်စရိတ်နဲ ့ကိုယ် ကျခံရပါတယ် ၊အကျင့်မပျက်ပျက်အောင် တွန်းပို ့တာပါပဲ ၊
မြေ နဲ့အိမ်ရာ ညွှန်မှုးနဲ့ ဒုညွှန်ချူပ်အနားမှာဆိုပွဲစား နဲ့အပေါစားကန်ထရိုက်တွေတရုန်းရုန်းနဲ ့ပွဲတော်ကြီးပါပဲ ၊
ပွဲစားတွေက သူတို့ ကိုခိုင်းလိုက် သူတို့က ဝန်ထမ်းတွေကို ခိုင်းလိုက် နဲ့လုံးလည် ချာလည်လိုက်နေတာပါပဲ။
ပြည်သူ ့အကျိုးပြု နေတာ၊ ပြည်သူ ့ဝန်ကို ထမ်းနေတာ clean government ,good goverence ကို ဖေါ်ဆောင်နေတာတွေကို မှန်းဆနိုင်ပါ လိမ့် မယ် ၊
ခင်မောင်မြင့် ဟာဒါတွေကို အကုန်သိပါတယ် ၊ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာ၊
သူ ့တပည့်တွေ ညစ်ပတ် နေတာ သိပေမယ့် အသံကောင်းတော့ ဟစ်ပါတယ် သူ ့ရဲ့အလှဆင်သူဂျာနယ် မှာ သူ ဘယ်လို ပြည်သူတွေအဆင် ပြေအောင် လုပ်ပေးနေတယ် ဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ရေးထားပါသေးတယ် ၊
မဟုတ်တရုတ်စာတမ်းတွေကို ရုံးမှာ ကပ်ထားပါသေးတယ် ၊လုပ်ရပ်ကတော့ ရေးထားတာနဲ ့တလွဲချည်းပါပဲ ၊
အခု ဟော့တ် နေတဲ့ လယ်သိမ်းခံ လယ် သမားတွေကိစ္စ တွေအားလုံးဟာ သူ ရှင်းရမဲ့ ကိစ္စ တွေချည်းပါပဲ ၊
(ဥပမာ -ဇေကမ္ဘာ ခင်ရွှေ ကိစ္စ ) ၊ ဝန်ထမ်းမြေ ကွက်တွေသိမ်းခံရတဲ့ ကိစ္စလည်း သူလုပ်တာပါပဲ ၊ အခုထိ မရှင်းပေးသေးပါဘူး ၊၊
ဝန်ထမ်းမြေကွက်တွေ သိမ်း ပြီး ယူထားတဲ့ကောင်တွေက လူကြီးတွေဆိုတော့ သူနဲ ့မဆိုင်သလို လုပ်နေတာပါ ၊
စုတ်ပြတ်သတ် စက်မှုဇုန်တွေ ဖေါ် ထုတ် ရိုက်စားတာလည်း သူပါပဲ ၊
မြေကစားနေတဲ့ ကိစ္စ တွေဟာလည်း သူ့ ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ ၊
သူရှင်းရမယ့် ကိစ္စ တွေပါပဲ ၊အိုးအိမ်ကို တာဝန်ယူတယ်ဆိုပြီး အိမ်မြေဈေး ခေါင်ခိုက်နေ တာကို ရှင်းလင်းရမဲ့တာဝန်ကို ရှောင်နေတဲ့သူပါ ၊
ပြည်သူ ကိုအကျိုးပြု ဘို ့ပြည်သူ ့ကိုယ်စားလှယ် ဆိုပြီး အရွေးခံ ၊ ပြည်သူ့ဝန်ကိုထမ်းဘို့ဝန်ကြီးလုပ် တယ်ဆို ပြီး ယုတ်မာတဲ့ စိတ် အကျင့်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီး ကိုယ့်သမိုင်းကို အိုးမဲသုတ် သေခါနီးတာတောင် သွား လမ်းဖြောင့်အောင် လုပ်ဘို့မစဉ်းစားတဲ့ကောင်ပါ
၊သူနဲ ့သူ ့တပည့်တွေ ရဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေကို ဆက်ပြီးတင်ပြသွား ပါမယ် ၊ အပတ်စဉ် တင်ပြသွားပါမယ် ။
ဇေယျာမာဃ ဆိုတာ ကလောင်နာမည်ပဲ။ သူ့အကြောင်းတော့ ပါပုံမရပါဘူး… သူကဝန်ကြီးကို မကြည်တာ ဖြစ်မယ်…. :-)
လုပ်စမ်းပါ ဗျာ အဲသလို အတွင်းစကားတွေကြားရတာ ပိုကောင်းတာပေါ့
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လို အင်တာနက် သုံးတတ် တဲ့ သူတွေသိဖို့ ထက်
မြေအသိမ်းခံ ရတဲ့ လယ်သမားတွေသိဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဂျာနယ်ထဲ ထည့်ဗျာ။
အမလေး… မြှောက်ပေးနေပြန်ပြီ… ခုတောင် ဂျာနယ်တွေတစ်စောင်ပြီးတစ်စောင်အကန့်အသတ်မရှိ အပိတ်ခံနေရတာ…။တုဝေရယ်….
အားပါး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပါကွယ်လားဟရို
အီကိစ ဝဖြည်ရှေး နိူင်ကြောင်း
မြီမာပြီက မြည်ဂျီးတွေ အကုန်
ဆည်ဆောက်လိုက်ရင် ကိစ အေးနီကြောင်း
မူရင်း စရေးသူကို ဂရုဏာသက်မိပါတယ်
အရင်ကလဲ ကုန်တာ ကြာတာ ပြန်မရတာပါဘဲ
ပစ္ဗည်းမဲ ဒေါသဆိုတာ ဒါပဲဖြစ်မယ် ထင်တယ်၊
နောက်လာတဲ့ မောင်ပုလဲက ဒိုင်းဝန်ထက် ကဲ
မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ
တွေရဲ့ အရေခွံက ကျွဲနွားထက် ပိုထူပါတယ်။
မျက်ကန်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ သူဘယ်တုန်းကမှ
မရခဲ့ဘူးတဲ့ အလင်းရောင်ကို ထူးပြိးတော့ တောင့်တခြင်း
မရှိသလို ကျွန်တော်တို့ အတွက်လည်း ဒိပို့စ် ဟာ
စစ်တိုက်ချင်လို့..စစ်ထဲဝင်တဲ့.. စစ်သားအပါအဝင်.. စစ်တိုက်ရာမှာသာ “ပရို”ဖြစ်တဲ့…စစ်သားတွေ.. စစ်လူထွက်ကလေးတွေကို.. အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးထဲ..အတင်းထိုးထည့်တာဟာ…. အဖမြန်မာပြည်ကြိး ပျက်စီးခဲ့တာရဲ့… အဓိက(အဓိက) အကြောင်းရင်းတရားတခုပါပဲ..
အဲဒီအကျင့်ဆိုးတွေ.. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထဲပါရောက်သွားပြီး.. တိုင်းပြည်တပြည်လုံး”ဆွဲချ”သွားတာပါ..
အစိုးရသစ်အနေနဲ့.. သေသေချာချာ.. လေ့လာ..ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း..
စစ်သား/စစ်တပ်ဆိုတာဟာ… တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
အခုကြည့်လိုက်ရင် ..ဘယ်ဌာနဆိုင်ရာမဆို… စစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့သူတွေချည်းပဲ… အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို
ဘာမှနားမလည်ပဲ..အာဏာတခုတည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ပျက်စီးနေတာပါ…